I-Mtn Top Cabin/Ukubuka Okumangalisayo/Ibhavu Elishisayo/Uhlu Olusha - I-Airbnb
I-Mtn Top Cabin/Ukubuka Okumangalisayo/Ibhavu Elishisayo/Uhlu Olusha
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Michael
Ikhabethe "lezinto ezikhuphukayo" - Ibanga elide, elinezingqimba eziningi zeMtn. Ukubukwa / Okukhuphukayo Kwaseyili yeKhathedrali ye-A-Frame / Ifasitela elisuka phansi liya kuCeiling / Indawo yomlilo yetshe / Ubhavu Oshisayo Okhazimulayo / I-Jacuzzi / Ngaphandle Komgodi Womlilo / i-WIFI / Umphakathi Wekhabethe Eliyimfihlo & Eligayiwe / Imigwaqo Egandayiwe / 10 Min. ukuya eBryson City / 15 Min. kuNat. Ipaki / Ukulala 6 (Ukufakwa Kuhlu Okusha - May 2021)
Uphahla oluphakeme lwe-A-frame-and-groove cathedral luyakwamukela njengoba ungena endaweni yokuhlala eyinhloko usuka kumpheme omboziwe. Udonga olukhulu lwamafasitela olusuka phansi kuya ophahleni olubheke ukubukwa luvumela ukukhanya kwemvelo ukuthi kungene kanye nokubukwa okuhle okubheke ngaphandle. Ukubuka kwezintaba ezinde, ezinezendlalelo eziningi ngokuqinisekile kuwucezu lombukiso lapha! I-Smoky Mountains ihlezi ishintsha, ukukhanya kwelanga kuveza inhlobonhlobo yemibala nethunzi ezintabeni nasemafwini, okunikeza ukubukeka okuhlukile ekubukeni usuku lonke.
Ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokudlela nezindawo zokuhlala eziyinhloko zonke zigeleza ndawonye ukuze kube nepulani yaphansi enamagumbi, elula nevulekile. I-Big 60” LED TV yokubuka izinhlelo zakho ozithandayo/amamuvi. Indawo yomlilo yamatshe, ye-gas-log ilungele ukuhlangana ngalezo zinyanga ezipholile. Hlalani nizungeze itafula legumbi lokudlela njengomndeni futhi nibabaze ukubuka kwentaba ngamafasitela njengoba nijabulela ukudla kwenu. Noma, dla ngaphandle emphemeni!
Emuva kumpheme owandisiwe, uzothola indawo eyanele yokuhlala yangaphandle ukuze ungene kulokho kubuka "wewu"! Uma sikhuluma ngokucwiliswa, i-o-so-relax ye-Hot Tub enezihlalo ezine (w/isici sempophoma) ilindele ukuncibilikisa konke ukukhathazeka kwakho emhlabeni ngemva kohambo olude losuku olude lohambo lwangaphandle. Indawo yokucima umlilo yangaphandle futhi iyindawo efanelekile yokosa lawo ma-smore futhi ujabulele ngaphandle! Igrill yegesi nayo ihlinzekwa kulabo bapheki abangochwepheshe!
Emuva ngaphakathi, ezingeni elikhulu elidlula ikhishi uzothola iwasha yakho egcwele usayizi ophelele, igumbi lokugezela eligcwele (elinobhavu we-Jacuzzi), kanye ne-King Master Bedroom esezingeni elikhulu (elifakelwe i-TV/DVD player yalo). Phezulu phezulu, uzothola igumbi lokulala eliphakeme elinendawo enkulu elinemibhede emibili engamawele kanye nombhede wendlovukazi onendlu yayo yokugezela ye-en-suite. Indawo ekahle yezingane noma izivakashi ezengeziwe, okuvumela le khabhini ukuthi ilale ngokunethezeka kufika izihambeli ezingu-6.
Konke okusha sha, May 2021:
*Ifenisha yeGumbi lokuhlala (osofa besikhumba abasezingeni eliphezulu, izihlalo kanye nempahla yezinkuni)
*60" i-LED TV
*King Bed in Master w/ Hybrid Plush Mattress
*Ubhavu oshisayo onezihlalo ezine kuDekhi
*I-Rustic Cabin Decor kuyo yonke indawo
Ikhabethe lihlala endaweni ephakeme ngamamitha acishe abe ngu-3 000, livumela lowo moya ohelezayo wasezintabeni ngisho nasezinyangeni zezulu ezifudumele. Umgwaqo oya ekhabetheni ugandaywe ngokuphelele futhi unakekelwa kahle. Ukuthambekela okumaphakathi, amajika ambalwa asheshayo, kodwa akukho okukhuphuka ngokweqile. Izimoto ze-2WD zilungile. Kulabo abangajwayele "ukushayela entabeni", mhlawumbe kungcono kakhulu ukuthi uzame futhi ufike ngesikhathi sasemini ngosuku lwakho lokungena. Ezinyangeni zasebusika lapho kuneqhwa elinzima noma iqhwa, lokho kungenza ukushayela kube nzima ngakho kungaphakamisa ukulinda kuze kuncibilike iqhwa/iqhwa (okuvame ukungathathi isikhathi eside lapha)
Indawo yokupaka ngaphandle kwekhabhinethi isezingeni ngokuphelele futhi ingamukela kalula izimoto ezi-3, uma kudingeka.
I-Cabin itholakala endaweni encane ye-Gated & Private Upscale Cabin Community e-Bryson City. Kunendlwana eyakhelene nayo eduze kwale ndlu. Amakhabethe amabili ahlukene, asanda kwakhiwa aqondana kwelinye. Gcwalisa ubumfihlo kanye nokuhlukaniswa ngenye indlela, njengoba ungeke ukwazi ukubona omakhelwane (ukubuka kuphela!)
I-Cabin iwuhambo olufushane lwemizuzu eyi-10 ukusuka edolobheni laseBryson City, imizuzu eyi-15 ukusuka ekungeneni kwe-Deep Creek e-Great Smoky Mountains National Park, kanye nemizuzu engama-20 noma ngaphezulu ukusuka eCherokee kanye nomnyango omkhulu wePaki. I-Nantahala National Forest kanye neLake Fontana zombili cishe zihamba imizuzu engama-20. I-Asheville NC (Biltmore Estate) ne-Gatlinburg TN ziqhele ngebanga elingaphezu nje kwehora.
Izitolo zasendaweni, izindawo zokudlela, izindawo ezidayisa utshwala/izindawo zokuphuza iwayini, ukugibela izikebhe/ukudoba emifuleni yendawo noma eLake Fontana, izindawo zokuqwala izintaba/izimpophoma, i-rafting/tubing emfuleni, igalofu, ukugibela amahhashi, imizila ye-ATV, ulayini woziphu - konke kungakapheli isigamu sehora. Ipharadesi lomthandi wangaphandle! I-Great Smoky Mountain Railroad iyaphela e-Bryson City futhi iwukuzizwisa okumangalisayo, okunenhlanzi okukhumbulayo.
Eduze kwezinye izindawo eziningi ezikhangayo nohambo lwasemini, ngiyajabula ukukunikeza okwengeziwe uma ucela.
Vakashela greatsmokies.com ukuze uthole ulwazi olwengeziwe oluhle endaweni yangakini!
I-TV / WIFI / Isevisi yeselula
Yebo, ikhona i-TV yesathelayithi etholakalayo. I-WIFI/I-inthanethi Eyisisekelo nayo inikeziwe futhi iyatholakala. Isevisi yeselula ivamise ukuba namandla endaweni yekhabethe, ngakho-ke izihambeli eziningi akufanele zibe nenkinga ngokwenza amakholi/i-inthanethi zisebenzisa amadivayisi azo, uma zifisa. Noma, khipha kukho konke (sincoma le ndlela engcono kakhulu)!
Nakanjani AKEKHO OKUBHEMAYO ngaphakathi kwendlwana. Inkokhelo engu-$500 izokhokhiswa nganoma ibuphi ubufakazi noma iphunga lokubhema ngaphakathi kwendlwana. Uma ubhema, sicela usebenzise imigqomo kadoti yangaphandle egunyaziwe, ungajikijeli phezu kwezinsimbi. Sibonga izivakashi zethu ngokubambelela kulo mgomo ukuze zonke izihambeli zethu zijabulele.
Ulwazi lokufika kanye nezinqubomgomo zethu zokuhlala kuzothunyelwa kusivakashi ngasinye cishe isonto elilodwa ngaphambi kosuku lwaso lokufika.
Ngihlala ngitholakala kunoma yiziphi izidingo/imibuzo/izinkathazo zesivakashi, ngaphambi noma ngemva kokuhlala kwakho. Umgomo wami uwukuphendula noma yimiphi imilayezo/izingcingo phakathi nehora ezitholiwe. Kukhulu ukuziqhenya ngokuqiniseka ukuthi isivakashi ngasinye sinezinkanyezi ezi-5, futhi sizosebenza ukuqinisekisa lokho.
Ngihlala ngitholakala kunoma yiziphi izidingo/imibuzo/izinkathazo zesivakashi, ngaphambi noma ngemva kokuhlala kwakho. Umgomo wami uwukuphendula noma yimiphi imilayezo/izingcingo p…